Home Wararka Midowga Murashaxiinta oo ka shiraya dib u dhaca Doorashada. Go’aan wadajir ah...
Midowga Murashaxiinta oo ka shiraya dib u dhaca Doorashada. Go’aan wadajir ah ma gaari karaan?
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha waxaa ay kulamo wadatashi ah ku lahaayeen Aalada Zoomka, iyaga oo kaga hadlayay hubaan la’aanta ka jirta doorashada iyo dib u dhaca weyn ee ku yimid jadwalkii doorashada.
Musharixiinta ayaa kulamadooda uga doodayay go’aan ay qaadan doonaan hadii illaa dhammaadka sanadkan saan saan doorasho dhicin iyo in sanadka cusub ee 2022 la dhiso Gole Qaran oo kumeel gaar ah (National Transitional Council) oo dalka gaarsiiya doorasho iyo dhismaha dowlad loo dhan yahay.
Xogaha kale ee la helayo ayaa sheegaya in Midowga Musharixiinta ay yeelan doonaan Shirweyne ay kaga tashanayaan xaalada dalka iyo doorashooyinka iyo sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sida uu dalka haatan ku socdo.
Dhaq dhaqaaqyo iyo shirar is daba joog ah oo ay horay u yeesheen Midowga Musharixiinta markii la dhisay Guddiyadii doorashada ee ku jiray Shaqaalaha dowladda iyo Nabadsugida ayaa dalka geliyay isbedel, iyaga oo sidoo kale siweyn uga horyimid muddo kordhintii Golaha Shacabka u sameeyeen Farmaajo, kaas oo markii dambe fashilmay.
Bilihii la soo dhaafay ayaa Midowga Musharixiinta waxaa ay walaac ka muujinayeen dib u dhaca ku yimid doorashada Soomaaliya, iyaga oo mas’uuliyadda dib u dhaca ku eedeeyay Golaha wadatashiga Qaran ee uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa xubno ka ah koox si dadban ugu xiran Villa Somalia oo howshooda aay tahay in kala dhantaalaan awoodda Midowga taasoo u muuqata in aay ku guuleysteen tan iyo markii ciidamada Badbaado Qaran laga saaray magaalada Muqdisho.